PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: အချဉ်ဖမ်း ခံရသူတွေရဲ့ ဘန်ကောက်
ဘန်ကောက်မြို့မြင်ကွင်းတနေရာ၊ ဓာတ်ပုံ- ဝီကီပီဒီးယား
တလောကပဲ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ပြောတဲ့ ဘန်ကောက်က လူလိမ်တွေအကြောင်း ဆိုတာ ဧရာဝတီ ဘလောဂ့် က ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုဟာက အလားတူပါဘဲ။ ဘန်ကောက်မှာ အချဉ်ဖမ်း ခံ ရတဲ့ မြန်မာမိသားစုတစုရဲ့ ကိုယ်တွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေထားတာပါ။ စာရေးသူ ဇော်မင်း ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
အခုလေးတွင် မိတ်ဆွေ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးက ဖေ့ဘုတ်ကနေ စကား ပြောလာပါတယ်။
သူတို့ ဆေးရုံ လာပြကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ အခုနေ့လည် တစ်နာရီခွဲလောက် က ဘန်ကောက် စင်ထရယ်ဝေါ နဲ့ Big C ကိုကူးတဲ့ တံတား ပေါ်မှာ အေးဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြပါ တယ်။
သူနဲ့ သူ့ အမ ဟာ ရှမ်းလူမျိုးတွေပါ။ ဒါကြောင့် ထိုင်းစကားနဲနဲနားလည်တယ် ဆိုပါတော့။ သူတို့ နှစ်ယောက် စင်ထရယ် ဝေါလ်ကနေ Big C ကို ကူးတဲ့ တံတား ပေါ်ရောက်တော့ အစိုးရ အတိုက် အခံ အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦး အပါအဝင် လူ ၇ ဦးလောက်က ဝိုင်းလာပြီး သူတို့ ပါ့စ်ပို့ကို စစ်ဖို့တောင်းပါသတဲ့။ အောက်မှာဖော်ပြမယ့်စာကတော့ သူတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပါ။
" ကိုဇော်ရေBKK သတင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ ညီမတို့ လည်းဆေးခန်းကိစ္စနဲ့ ဒီမှာရောက်နေတော့ စိတ်ပူလို့ပါ။ ဒီနေ့ ဆေးခန်းကို အလာ Isetan ကုန်တိုက်ရှေ့ ကတံတားကနေ Big C ကိုကူးလာတုန်း အစိုးရ အတိုက်ခံပါတီ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ လူတစုက ခုနှစ်ရောက်လောက်ရှိမယ် မိန်းမတစ်ယောက် လည်းပါတယ် ညီမတို့ ကိုတားပြီး passport အတင်း ထုတ်ခိုင်းတယ်။ နေက်ပိုက်ဆံအိတ်ပါ ထုတ်ခိုင်း တယ် နောက်အလှူငွေပုံစံမျိုး ပိုက်ဆံကို တစ်ယောက် ဘတ်တစ်ထောင်စီအတင်းပေးခိုင်းတယ် ညီမတို့ ကို တခုခုလုပ်မှာကြောက်လို့ ပေးပြီးအမြန် ထွက်လာလိုက်တယ်။ နေလည့်၁း၃၀ လောက်မှာပါ "
ထိုင်းနိုင်ငံမပြောနဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမဆို လူဝင်မှုကြီးကျပ်ရေး ရဲ(သို့မဟုတ်) တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ ရဲ ကသာ လျှင် ပတ်စပို့ ကိုစစ်ဆေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလို လမ်းလည်ခေါင် အလူခံ နေတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ လုပ်ရပ် ဟာ အေးဓါးပြ တိုက်တယ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖြစ်တဲ့နေရာက ဘန်ကောက်မြို့လည်ခေါင် လူအစည် ကားဆုံးနေရာမှာပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ ဖြတ်သန်း သွားလာ နေကြတာပါ။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ဒီဖြစ်ရပ် ဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကျွန်တော့် အတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
မနေ့က ပဲ အဲဒီ နေရာကကျွန်တော်ရောက် ခဲ့ပြီး အဲဒီ တံတားပေါ်မှာအလှုခံနေတဲ့ လူအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရ တာကိုး။ အများအတွက် အကျိုးရှိ အသိပေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာဆိုရင် ကျွန်တော့် အပေါ် အမြင် မကြည်ကြစေဦးတော့ အများ အကျိုးအတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပါမယ်။
ကျွန်တော့်စာကို လူအများဖတ်ပြီး လူတွေက Like လုပ်သွားတာထက် ကျွန်တော် ရေးတဲ့စာဟာ လူတစ်ယောက်ထဲကိုဖြစ်စေ အကျိုးပြုစေနိုင်ရင် ကျွန်တော် ရေးရ ကျိုးနပ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားရှိပါတယ်။ A little knowledge isadangerous thing. so isalot. လို့ လည်း အိုင်းစတိုင်း က မိန့်ဆိုထားပါတယ်။
မတောက်တခေါက် တတ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသလို သိပ်သိလွန်းတတ်လွန်းနေတာဟာလဲ ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ပါပဲ။
ဒီအဆိုမှာ မတောက်တခေါက် တတ်တာက ကိုယ့် ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာသလိုနဲ့တူသလို သိပ်သိလွန်းနေရင် တဖက်က ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးလာ နိုင်လို့ပါ။
ဘန်ကောက်မှာလာတဲ့ မြန်မာတွေကို သွားရင်းလာရင်းတွေ့မိပါတယ်။ ပွင့် ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင် သူတို့ ကိုကြည့်ရတာ ဘုရင့်နောင် နဲ့ အလောင်းဘုရားရဲ့ ဆွေတော်မျိုး တော်တွေ တိုင်းခန်းလှည့်လည်သ လိုမျိုးပါ။ မြင်ကြည့်ကြပါဗျာ။
အဖေလုပ်တဲ့သူက အင်္ဂလိပ်စာတတ် မျက်နှာချီလို့ ၊ အမေက နောက်က နေ ထမိန်စွန်တောင်စွဲ
တောင်ငေး မြောက်ငေး၊ သားနဲ့ သမီးတွေက မြန်မာလို တတွတ်တွတ်ပြော တောင်ဆွဲ မြောက် ဆွဲ... အဲဒီမြင်ကွင်း ဟာ ထိုင်း လူလိမ် အချဉ်သမားတွေအတွက်တော့ မြန်မာလား၊ ခမာ(ကမ်ဘောဒီးယား)လား၊ လာအိုလား ငွေတုံးကြီးတွေလှိမ့်လာသလိုပါပဲ။
အမှန်ပြောပြလို့ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။ မိတ်ဆွေတို့ အတွက် အသိပေးရတာပါ။ ဆေးဆိုတာမျိုးက ခါးတတ်ပါ တယ်။
အခု အချိန်မှာထိုင်းမှာ အခြေအနေတွေက ဘယောက်ဘယက် ရှုပ်ထွေးနေပြီး အစိုးရ မဲ့သလိုဖြစ်နေ တာပါ။ ထိုင်းတွေ ဟာ အဲလို မြန်မာလူစားတွေကို မပြောနဲ့ နိုင်ငံတကာလှည့်သွားပြီး အတွေ့အကြုံရင့်နေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဥရောပသားလိုလူတွေကိုတောင် လိမ်ညာလှည့်ဖျားပြီးငွေလုယူ နေတဲ့ကောင်တွေ ရိုက်သတ်လို့မကုန်ပါဘူး။
တုတ်တုတ် သုံးဘီးသမားတွေ တက်ဆီတစ်ချို့တွေ ကိုယ်မသိတဲ့နေရာ ပတ်မောင်းသွားပြီး ကွင်းပြင်ထဲမှာ မိသားစု တစ်စုလုံးကို ဝိုင်းပြီးလုတဲ့ အနေအထားတောင်ရှိဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုင်းရဲတချို့ကလည်း လူလိမ်တွေနဲ့ပင်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ထိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ် စာတတ်တဲ့သူ ရှားသလို မြန်မာပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ထိုင်းတွေ အတွက် မပေါက်ပါဘူး။
ထိုင်းတွေ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ရင်ပြောကြမှပါ။ ထို့င်းတွေပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆိုထာ ထိုင်း စကားများများကို အင်္ဂလိပ်လိုရောသုံးတာပါ။ တကယ်တတ်တဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကျပြန်တော့လည်း မြန်မာတွေထက် အသုံးအနှုံး လေယူလေသိမ်းက အစ ကွာခြားမြင့်မားလှပါတယ်။ အဲတာလေးကို တော့ သတိချပ်စေ ချင်ပါ တယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဓမပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ခဏ အလည်လာ၊ ဆေးကု လုပ်ကြ သူတွေ ရဲ့ ဘက်က ရပ်တည်ပြီးပြောပြချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ထိုင်းက ဂိုက် ဂိုက် ဆိုတဲ့ ကောင်လေး
တွေ ကောင်မလေးတွေ နဲ့ပါတ်သတ်လို့ပါ။ သူတို့ ဇာတိ က ထိုင်းနယ်နမိတ်နဲ့ နီးစပ်ရာ မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသတွေက လာကြ သူတွေမို့ ထိုင်းစကားကတော့ လျှာသွက်ကြတာ အမှန်ပါ။
သို့ပေမယ့် ဒီလိုလူငယ် လေးတွေမှာ ဆေးပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးလေတော့ ဆေးရုံ စကားပြန်အနေနဲ့ သုံးရင်လဲ ရောဂါနာမည်တပ် လွဲမှားတဲ့ အဖြစ်မျိုးကြုံရပြန်ပါတယ်။
နောက် တစ်ချက်က သူတို့ တွေမှာ တရားဝင် ဂိုက် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အခုတစ်လောမှာ ထိုင်းကို တရုပ်တွေ၊ ရဲရှားတွေ အဝင်များကြတော့ ထိုင်းလူမျိုး တရုပ်စကားပြန်တွေ၊ ထိုင်းလူမျိုး ရုရှား စကားပြန်
တွေ ကို မသုံးကြပဲ ဒီမှာ ကျောင်းလာတတ်နေထိုင်ကြ တဲ့ တရုပ်တွေ ရုရှားတွေက အချိန်ပိုင်း ဂိုက်လိုက် လုပ်ကြပါတယ်။
အဲတာကိုသိတဲ့ ထိုင်းဧည့်လမ်းညွှန်တွေက အစိုးရကို အဲလို လိုင်စင်မရှိ လုပ်စားပြီး သူတို့ ဈေးကွက် ဖျက်နေတဲ့ သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းပေးဖို့ သပိတ်မှောက်တောင်း ဆိုတာတွေ မကြာခဏ
အစိုးရက လည်းဖိဖိစီစီး အရေးယူနေပါတယ်။ မြန်မာဧည့်သည်တွေက ညီမလေးအဖြစ်၊ အမျိုး အဖြစ်ပြောပေး မယ်လို့ အကြောင်း ပြကြပါတယ်။
အမှန်တော့ သူတို့တွေဟာ တခြားမြန်မာ အတော်များများကို လိုက်ပို့ ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်လို့ ဂိုက်လုပ်စားနေ တဲ့ သူတွေမှန်း ထိုင်းဂိုက်တွေက သိနေကြ ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အရင်က သူတို့တွေဟာ ယာယီ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်နဲ့ နေကြရသူတွေပါ။
ဘန်ကောက်ဝန်းကျင်မှာ နေကြရ၊ ဘန်ကောက်ရဲတွေရဲ့ ညှင်း ပန်းနှိပ်ဆက်မှုကို အမြဲကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသူ၊ အဖမ်းခံခဲ့ရဖူးသူ၊ ငွေ အညှစ်ခံခဲ့ရဘူး သူတွေများကြပါတယ်။ ထိုင်းရဲတွေကလည်း သူတို့ ဝတ်ပုံစားပုံ ၊ အပြုအမူ လမ်း လျှောက်ဟန် ဘာညာကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းသိကြပါတယ်။
အဲတာဆိုရင် သွားလာနေရင်း အနားကပ်လာပြီး ချက်ခြင်း ပါ့စ်ပို့တောင်း ပိုက်ဆံညှစ် ရစ်တာ ဘာညာ အနဲဆုံး လုပ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်လူလိမ်တွေကလည်း ဒီလို ရဲတွေနဲ့ ပေါင်းစားပြီး အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုလုပ်တာပါ။
အထက်ကလို အဖြစ်အပျက်မျိုး မှာ သူတို့တွေမှာ ဖြေရှုင်းနိုင်အား မရှိကြပါဘူး။ မြန်မာဧည့်သည်တွေ၊ ဂိုက်တွေ ရဲ့ ဝတ်စားပုံအပြုအမူ အနေအထိုင်ဟာ ဘန်ကောက်သူဘန်ကောက်သားတွေနဲ့ ကွာခြားပါ တယ်။ သိပ်သတိထားမိလွယ်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲတော့ အစစအရာရာ ချင့်ချိန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ထိုင်းမှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိကသာ ပါတ်စ်ပို့ကို စစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကော်ပီလုပ်သွားပါ။ ကော်ပီကို ဆောင်ထားပြီး မူရင်းကို ဟိုတယ်မှာ အပ်တာ ချန်ထားတာလုပ်သင့်ပါတယ်။
ပတ်စ်ပို့ ယူစစ်သလိုတောင်းပြီး ငွေညှစ် တတ်သလို ရှာမယ်ဘာညာဆိုပြီး လက်ညီုးနဲ့ လက်ခလယ်ကြား မူးယစ်ဆေးဝါး ညှပ်ပြီး ကိုယ့် အိပ်ထဲထည့်၊ မျက်လှည့်ပြပြီး ကိုယ့်ဆီက တွေ့တယ် လုပ်တတ် ပါတယ်။
ဆူကွန်ဗစ် ၂၃ လမ်း တာမီနယ် ၂၁ ကုန်တိုက်နားက ရဲတစ်ကောင်ဆို မြန်မာ မပြောနဲ့ ဥရောပသားတွေ ကိုတောင် ပတ်စ်ပို့တောင်းစစ် ပီးရင် မပါလာရင် အိမ်လိုက်မယ်ပြောပါတယ်။ အိမ်လိုက်မယ်ဆိုတာ အိမ်လိုက်ရှာမယ်ဆို လိုက်လာပြီး အိမ်ထဲရောက်တော့ သူတို့ပါလာတဲ့ မူးယစ်ဆေး အိမ်ထဲမှာ ပစ်ပြီး ကိုယ့်ဆီက ငွေညှစ်ကြတာပါ။
ဒါကြောင့် အရေးရယ်ဆိုရင် မြန်မာသံရုံက အမှုထမ်းရဲ့ဆွေမျိုးလို့သာပြောချပါ။ အရှာမခံပါနဲ့။ မြန်မာသံရုံး ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ 022 337 250/ 022 344 698, 022 344 789/ 022 377 744/ 022 337 250 နှစ် လုံး သုံးလုံးလောက်ကို ဖုန်းမှာမှတ်ထားပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ လာ အချဉ်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားတာခံရသလို သိတဲ့တချို့လည်း အချဉ်ဖမ်းခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။
စီလုံသွားတဲ့ မိုးပျံရထားဘူတာ မှာပါ။ ဆာလာဒဲန်းဘူတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယလူမျိုးသားအဖ လူရှင်းနေ ရင် ဘယ်ဘူတာ ကို ဘယ်လိုသွားရလဲမေးရင်မေး။ အကြွေလဲစရာရှိလားမေးရင်မေး လာမေး တတ်ပါ တယ်။
ကိုယ်မသိတဲ့ အရပ်မှာ မသိဘူးပြောပြီးခပ်မြန်မြန်ခွာပါ။ မြန်မာက လာတာဘာညာ အင်္ဂလိပ်မူလီ လုပ်လို့ကတော့ မြန်မာပြည်လည်ချင်တယ်။ မြန်မာပိုက်ဆံ အမှတ်တရလဲချင်တယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိပ် အဖွင့်စောင့်တော့တာပါပဲ။
ဇာတ်ခနဲ လှမ်းယူပြီး ဖွင့် နှိုက်လို့ပါသွားသူများပါပြီ။ အခုပြောပြခဲ့တာတွေဟာ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှ မပါပါဘူး။ ဘန်ကောက်ကို လာလည်ရင် ရှောင်ကြဉ်သင့်တာတွေက တောသားမြို့ရောက်မလုပ်ပါနဲ့။ တတ်ယောင်ကားမလုပ်ပါနဲ့။ ငါတရားဝင်ပတ်စ်ပို့ကိုင်လာတာပဲ ဆိုပြီး လုံချည်၊ ထမိန်တွေနဲ့ လျှောက် မသွား စေချင်ပါဘူး။ မြန်မာဆိုရင် ညှင်းလိုက်ရမှ ဆိုတဲ့ဥာဏ် ထိုင်းတချို့မှာ ရှိနေဆဲပါ။
တစိမ်း အနား အကပ်မခံပါနဲ့။ တုတ်တုတ်သုံးဘီး စီးချင်တယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်ကို စီစဉ်ပေးခိုင်းပါ။ ဘုရားတို့ လူစည်ကားရာ နိုင်ငံခြားသား အလာများရာ နေရာက တုတ်တုတ်တွေမစီးပါနဲ့ ။
အနဲဆုံးတော့ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်တွေကို လှည့်ပတ်ခေါ်သွားတာခံရတတ်တဲ့ အပြင် အခန့်မသင့်ရင် မိတ်ဆွေက တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဝတ်လာလို့ သိပ်အထင်ကြီးသွားရင် ဓါးထောက်ပြီး အတင်းဝယ် ခိုင်း တာမျိုး ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။
မီတာတက်ဆီ စီးရင်လဲ နောက်ခန်းတံခါးဘောင်မှာတပ်ထားတဲ့ အဝါရောင်ကဒ် ပြားက အင်္ဂလိပ်လိုရေး ထားတဲ့ ကားနံပါတ်ကို ခေါင်းထဲ စွဲအောင် အသေမှတ်ပါ။
ထိုင်းစကား မတောက်တခေါက်တတ်ရင် ဖြစ်နိုင်ရင်မပြောစေလိုပါဘူး။ ထိုင်းတွေ က မြန်မာအောက်
ခြေသိမ်း အလုပ်သမားတွေ အပေါ် အရမ်းနှိမ့်ချ ဆက်ဆံပါတယ်။
ပိုက်ဆံလာဖြုန်းတဲ့သူတွေကိုတော့ အထင်ကြီးတတ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် ထိုင်းလို ရေးထားတဲ့ ဟိုတယ် လိပ်စာ ဆေးရုံလိပ်စာတွေသာပြလိုက်ကြပါ။ ဘေးကင်းပါတယ်။
ညရေးညတာ မိန်းခလေးများတစ်ဦးတည်း တက်ဆီမစီးပါနဲ့။ သပိတ်စခန်းနား မယောင်မလည် သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာ၊ သူတို့တွေ တားဆီး ထားတာတွေကို နေရာရွေ့တာမလုပ်ပါနဲ့။ တခြားနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တရုပ်တွေက ခရီးလှည့်သူတွေအဖြစ်သိသာပေမယ့်၊ မြန်မာတွေက ထိုင်းတွေနဲ့ ဆင်တော့ လူမှား ရိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ သတိပေးရရင်တော့ ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်ဖို့နဲ့ လူပါး ပုလင်းကွဲ ရှတတ်ပါကြောင်း သတိပေးဆောင်းပါးအနေနဲ့ တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ အပြုသဘောဆန်တဲ့ ဝေဖန်ခြင်းမျိုး နဲ့ အများစိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ ရေးသားမထားတဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို အမြဲမျှော်လင့် ကြိုဆိုလျှက်ပါ။